အကြောင်းအရာဘယ်မှာလဲ။ | Martech Zone
ဒီညငါဆောင်းပါးလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီးဒီ site ကိုတက်သွားတယ်။ တစ်နေရာရာမှာဒီစာမျက်နှာမှာသတင်းရှိပါသလား။ (ရှိပါတယ် ... ငါကအနီရောင်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်) ။ ဒါကလုံးဝရယ်စရာပါ။ ဒီစာမျက်နှာကိုဘယ်သူဖတ်ချင်သလဲ။ ကြော်ငြာများ၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရွေ့လျားနေသောကားများ၊ မျောနေသည့် divs များ…လုံးဝရယ်စရာကောင်းသည်။ ငါဘာကြောင့်ဒီဆိုဒ်များကိုမသွားသလဲဆိုတာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ငါဖတ်ရန်အကြောင်းအရာအမှန်တကယ်ရှာမတွေ့ပါ!
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအချိန်နည်းနည်းသုံးပြီး (ငါမဖတ်မိသော) သတင်းထောက်အားဤသည်မှာမကျေနပ်မှုဖြစ်သည်။ ငါနှင့်ညီမျှစဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ၂၇ မိနစ်ကြော်ငြာနှင့် ၃ မိနစ်တီဗွီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေမည်။
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP …အရာအားလုံး! သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
3:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 04
ငါလုံးဝ Doug သဘောတူသည်။ ပိုက်ဆံ (သို့) စာဖတ်သူတွေကိုကြော်ငြာဖို့သူတို့ရေးနေရင်ဒီလိုမျိုးဆိုက်တခုကိုငါမြင်တဲ့အခါငါတွေးမိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကြော်ငြာကိုမျှမနှိပ်မိရန်မရည်ရွယ်ပါ။
ဘလော့ဂါများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့တွင်မည်သည့်“ ဖန်စီ” ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းမည်ကိုကြိုးစားရုန်းကန်နေကြသည်။ ငါဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပြီ၊ အပတ်၏အဆုံးမှာငါ Imus Show ကိုဖော်ပြသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအကျဉ်းချုပ်တင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လီဇ်သည်အောင်မြင်သောဘလော့အဖြစ်၎င်းသည်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကသတင်းအချက်အလက်ကိုသာရှာဖွေနေတဲ့လူတွေကိုပိတ်ပစ်ချင်တယ်။ အနုပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါ့ကိုယ်ထဲမှာတီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့အရိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့မကူညီဘူး။
3:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 48
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွိုင်း ငါထောက်ခံမှုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါဟာအများကြီးကိုဆိုလိုသည်!